६ वर्षपछि खुल्यो इजरायल, तलव डेढ लाख भन्दा बढी हुने ! - Nepali in Australia
May 4, 2021 autherLeaveaComment on ६ वर्षपछि खुल्यो इजरायल, तलव डेढ लाख भन्दा बढी हुने !
निर्देशिका अनुसार विगतमा इजरायल गई काम गरेका, आमा, बुवा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास गरिरहेका वा कार्यरत रहेका व्यक्ति इजरायल जान पाउने छैनन्। निर्देशिका पारित भएसँगै करिब पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी खुलेको छ। पहिलो चरणमा पाँच सय जना नेपाली इजरायल जान पाउनेछन्। कामदार प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुनेछन्।